Lọ arụsị ndị dị ebube nke Ayutthaya | Akụkọ Njem
Tailandia Ọ bụ otu n'ime ebe ndị kachasị ewu ewu maka njem nlegharị anya nke mba ụwa na ihe nzuzo ahụ bụ ọdịdị ala ya na otu ọnụ ala si adịrị ndị njem nwere euro ma ọ bụ dollar. Gbọ elu ahụ nwere ike ọ gaghị adị ọnụ ala, mana ọnụ ahịa ibi ebe ahụ na-akwụ ụgwọ maka ihe niile. Aha a na-akpọ Ayuttahaya maara nke ọma?
Ọ bụ otu n'ime ebe nkiri ndị na-ewu ewu na Thailand: nnukwu otu mkpọmkpọ ụlọ nsọ magburu onwe ya nke UNESCO chebeworị site na ịkọ aha Ebe Ihe Nketa Worldwa. Ka anyị lee ebe ha nọ na otu esi achọta ha.
1 Ayuttahay Historical Park
2 Gaa na mkpọmkpọ ebe nke Attuhaya
3 Gaa na Attuhaya Archaeological Park
Ayuttahay Historical Park
Nke a bụ aha gọọmentị nke ebe dị na mpaghara Phra Nakhon Si Ayuttahaya. Ndi mkpọmkpọ ebe nke obodo ochie ahụ nke eze hiwere na 1351 na ọ bụụrụ isi obodo ruo na ngwụsị nke narị afọ nke XNUMX.
A mụrụ ogige akụkọ ihe mere eme dị ka ụzọ iji chebe mkpọmkpọ ebe ndị bara uru azụ na 1976, mana UNESCO mere ka echiche nke nlekọta na nchekwa dị na 1991 sikwuo ike. Asia nile. Mgbe ndị Europe zutere ya, ịtụ anya na ịma mma na okomoko nke ụlọ nsọ ya na obí ya.
O di nwute, na ngwụcha narị afọ nke XNUMX, ndị Burma wakporo obodo ahụ ma gbaa ya ọkụ, ọ bụkwa mkpọmkpọ ebe ya nke na-agwa anyị taa banyere ịma mma ahụ gara aga nke e wuru na okwute.
Gaa na mkpọmkpọ ebe nke Attuhaya
Ayuttahaya bụ agwaetiti dị na njikọta nke Pa Pa, Lopburi na Chao Phraya osimiri. From ga-esi n'ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ rute Thailand ma ọdụ ụgbọ ahụ dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, yabụ na ị ga-agafe ụgbọ mmiri ma ọ dịkarịa ala otu n'ime osimiri ndị a. Eziokwu bu na-abata ụgbọ okporo ígwè bụ ndị dị ọnụ ala ụdị njem kamakwa onye ga-enye gị ọmarịcha onyonyo nke odida obodo Thai.
Site na Bangkok, site na ọdụ Hualamphong, njem ahụ dị n’agbata otu awa na ọkara na awa abụọ na ọkara dabere na ọrụ ị na-ewere. Enwere oche klas nke abụọ na nke atọ dị oke ọnụ. Ọ bụrụ n ’ị ga-elele websaịtị ụgbọ oloko Thai, dobe ụfọdụ obi abụọ ma bịarute tupu oge akpọsa n’ihi na enwere ike ịnwehie. Mgbe emechara, ịgafe ụgbọ mmiri dịkwa mfe n'ihi na ọ bụ ụzọ ndị njem nlegharị anya na-aga, ha na-ahapụ nkeji iri na ise ọ bụla. Ma ị ga-agakwuru ha ka ị banye tukwu.
Ọ bụrụ n'ịchọghị ụgbọ oloko ị nwere ike iji bọs. Ọrụ ndị dị na Attuyhaya na-esi na Bangkok pụọ na nkeji iri abụọ ọ bụla site na North Terminal na akụkụ ikpeazụ na 20 elekere. Enwere ụgbọ ala ikuku nke mbụ na njem niile a na-eme atụmatụ iji were awa abụọ n'ihi ọnọdụ nke ụzọ gasị ma ọ bụ nkwụsị na-adịghị mma, ọbụlagodi na ọ na-ekwu ọrụ kpọmkwem. Ọ bụrụ n ’ị banye ụgbọ ala, ọdụ Ayuttahaya dị na Naresuan Street dị nso na Ahịa Chao Phrom.
Ee ee, ị nwekwara ike izere ụgbọ ala ma were otu minivan ma ọ bụ obere nke na-apụ site na ebe MoChit ma ọ bụ Rangsit. A ikpeazụ njọ ọzọ dịghị obere na-akpali bụ jiri ụgbọ mmiri si Bangkok rute nkwụsị na Ko Kret na Bang Pa-In. Ọ bụ ogologo njem, nke ga-ewe gị oge ụbọchị, mana ọ mara mma.
Vinggagharị n'agwaetiti ahụ dị mfe ebe ọ bụ na enwere okporo ụzọ U Thong nke gafere ya yana yana maapụ mara mma ebe ihe ị masịrị ya, ịkwaga ebe a gaa ebe ahụ dị mfe ma dịkwa mfe. Ị nwere ike gbazite igwe kwụ otu ebe Ọzọkwa na ọ dị mma ịgagharị ogige ntụrụndụ. Zọ ụkwụ ndị ahụ ghere oghe ma ụzọ dị n’etiti ụlọ nsọ ndị ahụ dị obere. Younwere ike ịhapụ agwaetiti ahụ site na igwe kwụ otu ebe n'ihi na ihe niile dị nso. Enwere ọtụtụ ụlọ mgbazinye igwe kwụ otu ebe ma ị nwere ike ịnweta maapụ ahụ site na ụlọ ọrụ ndị njem nleta dị na mpaghara gị.
Ma ọ bụrụ na-amasị gị tuktuk, mgbe ahụ ị nwere ike iji uru ndị dị ebe a, nke dị ntakịrị karịa ndị dị na Bangkok. Ma ọ bụ ịgbazite ọgba tum tum bụ nhọrọ ọzọ.
Gaa na Attuhaya Archaeological Park
Ọ bụ ihu ọma banyere ịga na obí eze atọ: nke Nnukwu Obí, Obí Chantharakasem na Wang Lang Palace na ole na ole ụlọ arụsị mebiri emebi na ndị ọzọ niile ka na-arụ ọrụ. Maka ụfọdụ ị na-akwụ ụgwọ ntinye na ndị ọzọ ị naghị akwụ ụgwọ. Eziokwu bu na ị chọrọ ụbọchị abụọ iji chọpụta mpaghara ahụ dum nke ọma ya mere, ọ bụrụ na i nwebeghị ụbọchị abụọ, ị ga-achịkọta.
Dị ka akụkọ ihe mere eme nke obodo nwere ike itinye uche na oge atọ, ị nwere ike kewaa nleta n'ime ụlọ site na oge atọ akụkọ ihe mere eme ma mee ka ihe dị mfe. Ndị ị na-agaghị amali elu:
Wat mahathat: Ọ bụ ebe isi Buddha dị ma ọ bụ mkpọmkpọ ebe. Ọ dị n'etiti obodo ahụ ma bụrụ ebe obibi nke Onyeisi Ndị Isi nke Onyeisi. Ọ na-kweere na e wuru na narị afọ nke XNUMX na ọ bụ ezie na prang Oge ikpeazu ya dara na 1911 i gha hu na o buru ibu ma too ogologo.
Lelee Ratchaburana: Eze Borom Ratchathirat nke Abụọ wuru ya n'otu ebe ebe e gburu ụmụnne ya abụọ na-alụ ọgụ maka ocheeze. E zuru ihe oyiyi nke chi ebe a ma nwetaghị obere ihe. N'ime ya enwere ọhụụ nke ndụ Buda, mana ihe niile emebiwo nke ukwuu.
Wat Phra Si Sanphet: Towlọ elu ya atọ ma ọ bụ chedis ya taa bụ akara nke ogige ihe ochie. Chọta ụlọ arụsị ndị a n'ime ogige nke obí eze ma ejiri ya naanị maka emume eze ma ọ bụ iji dobe ihe ncheta. A kwenyere na chi atọ a nwere ntụ nke ndị eze atọ.
Wat Chai Wattanaram: E wuru ya na 1630 iji mee emume nke eze Prasat Thong ma enwere ndi isi ndi ozo ya na otutu ulo. Central prang na-anọchite anya Ugwu Meru na akụkụ anọ ahụ na-anọchite anya kọntinent anọ nke ụmụ mmadụ bi na Buddhist cosmogony. Na mbu o nwere Buddha lacquered 120 na otutu mural mana na XNUMXth century, eji ya dika uzo eji agba egbe ma emesia ire nkume na brik ghọrọ ihe amara.
N'ikpeazụ, e nwere Aha ya bụ Phanan Choeng, nke nwere nnukwu onyonyo nke Buddha, ndị Wat Phuthai Sawan, nke Aha nke Phra Ram, nke Otu na Phramen, nke Ụlọ ọrụ Choeng Tha na Wat Suwan Dararam na Wat Mongkhon Bophit. N’ezie enwere ọtụtụ ndị ọzọ, nke ọ bụla nwere mma nke ya na ọ bụ ya mere ụbọchị abụọ jiri dị mma karịa otu.
Ọzọkwa enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ileta ma ọ bụrụ na ị nọrọ ogologo oge ị nwere ike ịga leta ha: the Utlọ Ọrụ Ihe Ọmụmụ Akụkọ Ayuttahaya onye nleta ya na-atụ aro ka ị mee tupu ịga na ogige ihe ochie, the Chantharakasem National Museum na Chao Sam Phraya National Museum. Ma ebe ọ bụ na obodo ahụ enweela mmekọrịta na ọtụtụ ọdịbendị mba ọzọ, ị nwere ike ịgagharị ebe ndị ọbịa a maara etu ha ga-esi biri.
Yabụ, ị nwere ike ịbịaru nso ịmara ihe mmezi Dutch malitere site na narị afọ nke iri na asaa, ndị Japan nke ọ nweghị ihe mbụ fọdụrụnụ mana gọọmentị Japan ewughachila a ogige ogige Japan myirịta na ndị Portuguese na mkpọmkpọ ebe nke ụlọ ụka Dominican. N'ikpeazụ, ị gaghị akwụsị ije ije na Ayothaya floating Market.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Lọ arụsị ndị dị ebube nke Ayutthaya
Ihe ị ga-ahụ n’obodo Leuven